FAPBM – taona 2017 : 72 tapitrisa dolara ny fiarovana ny fari-dranomasina | NewsMada
FAPBM – taona 2017 : 72 tapitrisa dolara ny fiarovana ny fari-dranomasina
Tsy afa-misaraka amin’ny ranomasina ny tantaran’i Madagasikara. “Ny ranomasina no valam-parihiko”, hoy Andrianampoinimerina, tany amin’ny taonjato faha-18. Harena lehibe ny maha Nosy ny tanindrazantsika, ary Nosy lehibe fahatelo maneran-tany. Koa misy tetikasa manokana iarahana amin’ireo vahiny mpamatsy vola ho fiarovana izany harem-pirenena izany.
Fantatra maneran-tany ny fananan’i Madagasikara karazana voajanahary any anaty ranomasina. Nomena anarana “Zombandriake”, ara-bakiteny hoe harena anaty ranomasina manodidina an’i Madagasikara, iarahana amin’ny CFEP (1), WSC (2), WWF(3) , niainga avy amin’ny fehinkevitra tapaka tany Sydney, ny taona 2014. Tapaka tamin’izany ny hampitomboana avo telo heny ny fari-dranomasina arovana eto amin’ny Nosy mialoha ny taona 2024.
Mila famatsiam-bola goavana sy maharitra ny tetikasa. Anisan’ny goavana amin’ny mpamatsy vola eto an-toerana ny FAPBM (Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar). 72 tapitrisa dolara ny fanomezana, ny taona 2017 ; 2,4 tapitrisa dolara ny famatsiana azo, ny taona 2017 ; miampy karazana tahiry maro, 200.000 na 250.000 dolara isan-taona. Fari-dranomasina voaaro iray, hahitana tombony eo amin’ny toekarena sy sosialy.
Ranomasina mira fidiram-bola
Antenaina amin’izany koa ny vola miditra amin’ny mponina any am-potony amin’ny endriny samihafa : fizahantany, fikarohana, famokarana angovo azo havaozina, sns. Karazany telo ny azo ampiharina amin’izay fidiram-bola izay : voalohany, vidim-pidirana ny fitsidihana ireo faritra ireo, zo aloa ho an’ny fikarohana ; faharoa, tambiny aloan’ireo indostria noho ny loto mivarina any amin’ireny faritra ireny, ka ny vola azo avy amin’izany hoentina hanadiovana ny fiantraikan’ny loto ; fahatelo, famatsiam-bola mahaleotena sy maharitra.
Misy lalàna mandrafitra ny asa rehetra atao amin’izany, na ny Code des aires protégées (Coap), nolanina ny 26 febroary 2015. Ny atao amin’izany, ohatra, ny fanaraha-maso ny fari-dranomasina, ny tahiry ao aminy ho fanomezan-danja ireo harena ireo. Vondrona na fikambanana maro mitantana izany amin’ny alalan’ny tambajotra Mihari : fametrahana dina, famaritana faritra vaovao, ary fitantanan’ireo vondron’olona ifotony ny faritra.